$ 25,000 Deeqda waxbarasho ee PCI ee Ardayda ka socota Mareykanka, Kanada & Mexico 2020 2022
$ 25,000 Deeq waxbarasho oo loogu talagalay Ardayda ka socota Mareykanka, Kanada & Mexico 2020
Machadka Daaweynta budada (PCI) wuxuu siiyaa barnaamijyadiisa sanadlaha ah ee '2020 PCI' ardayda ka kala timid daafaha Mareykanka, Kanada ama Mexico.
Abaalmarinta PCI waxay u furan tahay ardayda dhigata shahaadada koowaad ee jaamacadeed ama qalin-jabiyaha ah ee wax ka barta teknolojiyada dharka warshadaha iyo barnaamijka tiknoolajiyada dahaadhka budada.
Machadka Daaweynta Budada waa urur aan macaash doon ahayn oo la aas aasay 1-dii Maajo, 1981. Waxaa ka go'an inay kor u qaaddo faa'iidooyinka teknolojiyadda dahaadhka budada si ay ugu adeegto xubnaheeda.
Jaamacad ama Urur: Machadka Daaweynta Budada (PCI)
Heerka Koorsada: Shahaadada koowaad ama qalin-jabinta
Award: Wadarta $ 20,000 ilaa $ 25,000 sanad kasta
Jinsiyada: Muwaadin Mareykan ah, Kanadiyaan ah ama reer Mexico ah.
Dalalka u Qalma: Mareykanka, Kanada ama Mexico
Koorso La Aqbali karo ama Maado Koorsada shahaadada koowaad ama qalin-jabinta ee teknolojiyada dharka warshadaha iyo tiknoolajiyada dahaadhka budada.
Shuruudaha Codsiga deeqda waxbarasho
Si aad ugu qalanto deeqda waxbarasho ee 'PCI Scholarship' iyo / ama 'PCI Corporate Scholarship', codsadayaashu waa inay hubiyaan waxyaabaha soo socda:
Codsadeyaashu waa inay ka diiwaangashan yihiin laba ama afar sano dugsi farsamo, jaamacad afar sano ah, ama barnaamij qalin jabiya oo bixiya daraasado la xiriira warshadaha wax lagu dubo ee budada ah sida sayniska polymer, wax soo saarka, injineernimada, maaraynta ganacsiga, ama iibka / suuqgeynta
Musharrixiinta waa inay noqdaan muwaadin ama degane rasmi ah Mareykanka, Mexico ama Kanada
Waa inuu joogteeyaa GPA-ga 2.5 ama wixii ka sareeya
Faa'iidooyinka deeqda waxbarasho iyo Codsiga
Sida loo Codso: Hanjabayaashu waa inay soo gudbiyaan codsi khadka tooska ah oo ay ku soo rogaan waxyaabaha loo baahan yahay oo leh macluumaad guud.
Taageerida Dukumentiyada: Codsiga la buuxiyay, codsadayaashu waa inay soo gudbiyaan Qoraal, Warqad talo bixin ah oo ka socota xubin macalimiin ah, Nuqul shahaadada dhalashada ama kaarka cagaaran, oo muujinaya caddeyn dhalasho / deganaansho rasmi ah
Shuruudaha Gelitaanka: Waa inuu kaqeyb qaataa xarun waxbarasho oo bixisa daraasado laxiriira warshadda dufanka budada.
Shuruudaha Luqadda: Ardaydu waa inay lahaadaan amar wanaagsan oo ku saabsan luuqadda Ingiriiska
Sanduuqa waxbarashada ee ay aasaaseen PCI wuxuu abaalmarin siiyaa ardayda daba socota daraasadaha ku saabsan dhinacyada la xiriira dahaadhka budada.
Gudigu wuxuu ansixiyaa qadarka barnaamijka ee sanadka kalandarka. Hubinta deeqda waxbarasho waxaa lagu hagaajin doonaa koontada ardayga ee dugsiga.
Wixii macluumaad dheeraad ah, kala xiriir: Kelly LeCount oo ah scholarship@powdercoating.org.
ugu dambaysa ee arjiga: Maarso 13, 2020.
Deeqaha Canadianka Deeqda waxbarasho ee Mexico Deeqaha waxbarasho ee Mareykanka Shahaadooyinka Maraykanka
Previous Post:Abaalmarinta Caalamiga ah ee Shahaadada iyo Shahaadada ee Jaamacadda Grand Valley State University, USA
Post Next:Deeqaha Tufts ee Muwaadiniinta Mareykanka iyo Ardayda Caalamiga ah 2020
Waxaa cusboneysiiyay 2 sano kadib Adaeze Nwachukwu